Maitiro ekugadzira maMovie muGoogle Mifananidzo application | IPhone nhau
Maitiro ekugadzira maMovie muGoogle Mifananidzo app
Iyo Google Mifananidzo kunyorera kune vanhu vazhinji yave kutove yakakosha. Iko mukana wekuchengetedza ese edu mafoto mahara kuti ugone kuaona gare gare inonakidza kwazvo sarudzo. Kana iwe ukashandisa iyo Google Mifananidzo application, sezvo iwo mafoto akaiswa iwe unenge wakazviona izvo Iyo application inongotitumira isu zviziviso ichitizivisa isu nezve mavhidhiyo kana nyaya iyo inogadzira sezvo iyo mifananidzo inoiswa. Iko kunyorera kunozvigadzira nyaya uye mabhaisikopo ezvinyorwa izvo zvatiri kupa kuburikidza needu reel kana nekuisa iyo mifananidzo kuburikidza neiyo desktop application Asi sezvo zvisingawanzo kururamisa kazhinji, pazasi tinokuratidza diki dzidziso kuti ugone kugadzira maMovie muGoogle Mifananidzo.
Gadzira Mafirimu paGoogle Mifananidzo
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuenda kumenyu iri kuruboshwe rwechiso, uko kwese sarudzo dziripo dzinoratidzwa: Mubatsiri, Mapikicha, Unganidzo, Yakagovaniswa Links, Tsvina, Zvirongwa, uye Rubatsiro & Matipi.
Dzvanya pa Mubatsiri. Ichi chikamu chinoratidza nyaya dzakagadzirwa kusvika pari zvino uye isu takamirira kuongorora kana tichida kuzvichengetera ramangwana kana kuda kuzvirasa.
Isu tinoenda kumusoro kwepamusoro chikamu chechidzitiro uye tinya nezve + chiratidzo.
Pazasi a donhwe-pasi menyu iine zvinotevera sarudzo: Album, Movie, Nhoroondo, Mifananidzo uye Collage. Tinosarudza Movie.
Ipapo isu tinongofanira kudaro sarudza ese mafoto atinoda kuisa mune iyo nyaya uye tinya Gadzira.
Iko kunyorera kuchatanga gadzira iyo bhaisikopo ine yese mifananidzo uye mavhidhiyo atakasarudza.
Kana kugadzirwa kwemuvhi kwapera, sarudzo dzinoverengeka dzinozoratidzwa. Tichadzvanya pachiratidzo chemimhanzi ku sarudza mimhanzi inokodzera zvakanyanya vhidhiyo yatakagadzira. Tine akati wandei mapoka: Anoshamisa, Emagetsi, Anoratidza, Dombo uye Anotarisira. Pakati pechikamu chimwe nechimwe tichawana nziyo dzakasiyana dzekusarudza kubva.
Muchikamu chimwe chete ichi, kana takawedzera mavhidhiyo, tinogona sanganisira odhiyo odhiyo kubva kumavhidhiyo pamwe nemumhanzi wepashure.
Tinogona zvakare chinja marongero ayo mapikicha anoratidzwaKuti tiite izvi tinofanirwa kudzvanya pane icon kurudyi kwechiratidzo chemimhanzi.
Zvakare kuruboshwe kwechiratidzo chemimhanzi, tinogona Sarudza kushandisa pakati pemisoro yakasiyana kunyatsogadzirisa vhidhiyo yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzira maMovie muGoogle Mifananidzo app
Rose marie akadaro
Kana iyo "mafirimu" sarudzo isiri mu wizard, ndingaiwedzera sei?
Pindura kuna Rose Marie
Ini handiwaniwo sarudzo iyoyo, iyo bhaisikopo ...
Ami haataridzi yemafirimu nekuti ichave iri?
Mumwe munhu anogona kundiudza kuti nei pasina mafirimu anoonekwa?
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, sarudzo dzese dzinoonekwa asi iyo bhaisikopo haisi pakati peavo ...
idem, haina kuoneka 🙁
Pindura kuna Lore
Sarudzo yekugadzira bhaisikopo haioneki kwandiri kana. Chete collage, mifananidzo. Asi hapana bhaisikopo. Zvandinogona kuita? Chinhu chakashamisa ndechekuti chirongwa ichi chinogadzira iyo bhaisikopo otomatiki kubva akateedzana mafoto ezuva.
Velox 2 Zvino Inowanikwa pane iOS 8.4 Jailbreak
Zvinotora maPhones mangani kumisa AK-74 bullet?